China PS4 Wireless Controller၊ Playstation 4/Slim/Pro Console/PC Game အတွက် အားပြန်သွင်းနိုင်သော Gamepad Remote ကို အဆင့်မြှင့်ပါ Dual Shock၊ Touch Pad နှင့် USB Cable Thumb Grip Cap (Blue) စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူများ |Mcldosly
PS4 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ Playstation 4/Slim/Pro Console/PC ဂိမ်းအတွက် အားပြန်သွင်းနိုင်သော Gamepad အဝေးထိန်းစနစ်အား Dual Shock၊ Touch Pad နှင့် USB Cable Thumb Grip Cap (အပြာရောင်)
1.မော်ဒယ်အသစ် Gamepad - ps-4 အတွက် အထူးဒီဇိုင်း။အဆင့်မြှင့်ထားသော အသွင်အပြင်အသစ်၊ စတိုင်ကျသော အရောင်အသွေးနှင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့် ခလုတ်ဒီဇိုင်းတို့သည် လိုက်ဖက်ညီစွာ လိုက်ဖက်ညီစွာ လိုက်ဖက်ညီစွာ မတူညီသော gamepad တစ်ခုရှိသည်။၎င်းသည် ပေါ့ပါးပြီး (0.47) LB သာရှိသည်။အကြာကြီးကိုင်ထားရင် ပင်ပန်းမှာ မဟုတ်ဘူး။
2.Wide Compatibility & Upgrade လုပ်ဆောင်ချက် – BRHE ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းကိရိယာသည် မတူညီသောပလက်ဖောင်းများတွင် ဂိမ်းကစားခြင်းကို နှစ်သက်နိုင်သည့် PS-4/PS-4 pro/Slim နှင့် PC ဂိမ်းများနှင့် အပြည့်အဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။TURBO လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် သင်သည် FPS esports ဂိမ်းများတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော ပစ်မှတ်တိကျမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
3.ကြာရှည်ခံသောဘက်ထရီနှင့် အမြန်အားသွင်းခြင်း – PS-4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် တာရှည်ခံပစ္စည်းဖြစ်သော 850 mAh လီသီယမ်ပိုလီမာဘက်ထရီတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဂိမ်းကစားချိန် 8-10 နာရီအထိ2နာရီကြာ အားသွင်းရုံသာဖြစ်သည်။အားသွင်းဌာန သို့မဟုတ် USB ကြိုးဖြင့် လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်သည်။သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် အချိန်မရွေး ဂိမ်းကစားပါ။
4.High-Sensitive & Dual Vibration – တုံ့ပြန်မှုကောင်းမွန်ပြီး ချောမွေ့သော analogတုတ်များနှင့် အစပျိုးခလုတ်များသည် input lag နှင့် drift မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။Built-in dual shock and gravity sensor function၊ ps-4 controller သည် သင့်အား မတူညီသောတုန်ခါမှုနှင့် ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
5.ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံ - ဘက်စုံသုံး touchpad၊ တည်ငြိမ်သော Bluetooth ချိတ်ဆက်မှု၊ 3.5mm နားကြပ်ပေါက်၊ LED မီးများ၊ ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှုနှစ်ခုနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ဂိမ်းများ၏တိကျမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို ပေါင်းထည့်သည်။တကယ့်ကစားသမားတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။
* High-sensitive နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဂိမ်းခလုတ်များ
* 6-axis gyroscope တပ်ဆင်ထားပြီး၊ သင့်အား ပြီးပြည့်စုံသော ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ပေးသည်။
* Built-in Speaker နှင့် 3.5mm Audio Jack
* PS-4/ Pro/ Slim ကွန်ဆိုးလ်နှင့် PC ဂိမ်းများနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
PS4 Console ချိတ်ဆက်မှု
1. အဆင့် 1- USB ကြိုးကို အသုံးပြု၍ PS4 ကွန်ဆိုးလ်ကိုဖွင့်ပြီး ၎င်းကို PS4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာ (Off state) နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
2. အဆင့် 2- ပင်မခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် RGB LED မီးဘားညွှန်ပြချက် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။ချိတ်ဆက်မှုအောင်မြင်သောအခါ၊ LED မီးဘားသည် အမြဲတမ်းပွင့်နေမည်ဖြစ်သည်။
3. အဆင့် 3- USB ကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး Bluetooth နည်းပညာဖြင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြင့် ကြိုးမဲ့ဂိမ်းကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပါဝါပိတ်- ပင်မခလုတ်ကို 10 စက္ကန့်ကြာ နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ပိတ်သွားပါမည်။
ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ- ပင်မခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ PS4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် USB ကြိုးမပါဘဲ ကွန်ဆိုးလ်သို့ အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။
Android / IOS13 / PC ချိတ်ဆက်မှု
1. အဆင့် 1- စက်၏ဘလူးတုသ်ကိုဖွင့်ပါ။
2. အဆင့် 2- တစ်ချိန်တည်းတွင် SHARE နှင့် HOME ခလုတ်ကို 3-5 စက္ကန့်ကြာ ဖိထားပါ၊ အချက်ပြမီးသည် လျင်မြန်စွာ လင်းလက်လာမည်ဖြစ်သည်။
3. အဆင့် 3- Bluetooth စာရင်းတွင် "DUALSHOCK4Wireless Controller"/"Wireless Controller" ကိုရွေးချယ်ပါ။အောင်မြင်သောချိတ်ဆက်မှုကိုညွှန်ပြရန် အချက်ပြမီးသည် အမြဲတမ်းပွင့်နေမည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်- ကြိုးမဲ့ ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုရန်အတွက် PC သည် ဒရိုက်ဗာကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။
ယခင်- PS4 အတွက် ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ တပ်ဆင်ပြီး 1000mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ (ရွှေရောင်) ပါရှိသော PS4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာအတွက် အစားထိုး
နောက်တစ်ခု: PS4 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ Playstation 4/Slim/Pro Console/PC ဂိမ်းအတွက် အားပြန်သွင်းနိုင်သော Gamepad အဝေးထိန်းစနစ်အား Dual Shock၊ Touch Pad နှင့် USB Cable Thumb Grip Cap (အပြာရောင်)
Nintendo Joycon Controlle အတွက် Switch Controller...
PS4 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ အားပြန်သွင်းနိုင်သော G ကို အဆင့်မြှင့်ပါ
PS4၊ Wireless PS4 အတွက် DOSLY Gamepad Controller...
PS4 ကြိုးမဲ့အတွက် PS4 Controller Game Controller...